Saamaynta Isbeddelka Cimilada Iyo Colaaduhu Ku Yeesheen DDS Iyo Qisada Hooyo Caasha Khaliif Oo Reuters Baahisay | HAWRAARSAN NEWS
Home Wararka Deegaanka Saamaynta Isbeddelka Cimilada Iyo Colaaduhu Ku Yeesheen DDS Iyo Qisada Hooyo Caasha...
Isbeddelka cimilada iyo colaaduhu waxay saamayn ku yeesheen gobolka Geeska Afrika, si gaar ahna waxay u taabteen dalka Itoobiya oo uu deegaanka Soomaalidu ku jiro.
Caasha Khaliif Cali waa hooyo Soomaaliyeed oo kasoo barakacday deegaanka Oromada oo qoyskeedu degganaa kaddib markii ay la dilay saygeeda iyo walaalkeed taas oo salka ku haysay isku-dhacyadii Soomaalida iyo Oromada, waxaana muddadii ay orodka kusoo jirtay ay lasoo kulantay dhibaatooyin adag oo soo gaadhay iyada naf ahaanteed iyo ubadkii ay badhkooda xambaarsanayd.
Wakaaladda wararka Reuters oo warbixin ka diyaarisay sida isbeddelka cimilada iyo colaaduhu u saameeyeen Shacabka Soomaaliyeed, waxay si gaar ah usoo qaateen nolosha Caasha Khalif Cali oo ah hooyo haysata toddoba carruur ah oo midka ugu yar ay dhabarka ku siddo.
Si ay amni iyo cunto ugu hesho ubadkeeda, waxay ku qasbanaatay inay usoo qaxdo duleedka magaalada Jigjiga oo ay ka mid noqotay dadka ku jira xerada Qaxootiga ee Qoloji oo ay ku jiraan qoysas badan oo sideeda oo kale ay isku-dhacyadii Oromada iyo Soomaalida oo ay u sii raaceen Abaaruhu keeneen inay kasoo barakacaan deegaamadoodii.
“Caasha, abaaraha labada sannadood ka hor dhamaaday waxa uga sii darnaa colaaddii u dhaxaysay Soomaalida iyo Oromada. Rag hubaysan oo kasoo jeeda qowmiyadda kale ayaa dilay saygeedii, iyaduna ubadkeeda ayay ula qaxday buuraha. Shan maalmood oo ay lugaynaysay, ubadkeedu may helin cunto, caanihii naaskeeda ku jirayna way qallaleen. Markii ay ugu dambayntii soo gaadheen tuulo nabdoon, Caasha way suuxday, iyada iyo afar ka mid ah carruurteedana cusbitaal ayaa la dhigay.” Ayey tidhi warbixinta wakaaladda wararka Reuters.
“Waxay amni ka heleen tuulada Tuli Guuleed oo ku taalla bariga Deegaanka Soomaalida, halkaas oo Hayádda ICRC ay ku siisay midho iyo agab ay beer ku qodoto. Markii ay roobab waaweyn da’een ee beertiina usoo baxday, waxa ku habsaday ayax saxare u ekaysiiyey beertii, dhamaan dalaggiina baabi’iyey, iyadana ka dhigay rajo la’aan.” Ayay mar kale tidhi warbixintu.
Caasha Khaliif Cali waxay u sheegtay Reuters in isbeddelka cimiladu uu wax badan saameeyey, qiimaha cuntaduna cirka isku shareeray.
“Noloshu in badan ayay isbeddeshay tan iyo isbeddelkii ku yimid xilliyada. Cuntadu aad ayay qaali u tahay. Markii hore saddex jeer ayaanu maalintii wax cuni jirnay, haddana hal waqti oo kaliya ayaanu awoodnaa.” Ayey tidhi Caasha Khaliif Cali oo ilmaynaysay, isla markaana ay ag fadhiyeen laba ka mid ah carruurteeda ugu yar.
Hooyo Caasha Khaliif Cali, waxay ka baqaysaa in carruurteedu ay macaluul u dhintaan, waxaanay tidhi: “Waxaan ka baqayaa in carruurtaydu ay macaluulaan.”
Isku-dhacyadii Qowmiyadda ku sallaysanaa, waxay sannadkii 2018 ka dhigeen Itoobiya dalka ay gudihiisa ku barakaceen dadkii ugu badnaa caalamka oo dhan, waxaana lagu qiyaasay in 2.8 milyan qof ay deegaamadooduu uga carareen colaadaha qowmiyadaha, waxaana dadkaas ku jira kumannaan qoys oo Soomaali ah.
Previous articleHoggaanka Nabadgalyada Oo Shir Nabadgalto Ku Qabtay Tulli Guleed